संक्रमण भई होम आइसोलेसनमा बसिरहेकाहरु आफ्नो अवस्थाबारे स्थानीय तहको स्वास्थ्य संयन्त्रले सम्पर्कसम्म नगर्दा आत्तिएका छन्
वैशाख १९, २०७८ सन्जु पौडेल, मधु शाही, नवीन पौडेल
रूपन्देही/बाँके/परासी — अचानक घाँटी दुखेपछि उनलाई शंका लाग्यो– कतै कोरोना संक्रमण त भएन ! बुटवल–४ की ४६ वर्षीया ती महिलाको शुक्रबार पीसीआर रिपोर्ट कोरोना पोजिटिभ आयो । उनी नौ दिनदेखि संक्रमित छोरी र श्रीमान्को हेरचाह गरिरहेकी थिइन् । त्यस क्रममा आफूलाई पनि संक्रमण सरेको हुन सक्ने उनले बताइन् । ‘घरमै बाबुछोरीको स्याहार गरिरहेकी थिएँ,’ उनले भनिन्, ‘संक्रमणले समस्या हुने रहेछ भन्ने बल्ल भोगेँ ।’
पहिले संक्रमित श्रीमान् र छोरीलाई के खुवाउने/नखुवाउने आफन्तसँग सोधेर रेखदेख गर्दै आएकी थिइन् । आफैं संक्रमित बनेपछि भने समस्यामा परेको उनले बताइन् । आफूले मधुमेह र थाइराइडको औषधि सेवन गरिरहेकाले डर लागेको उनले बताइन् । ‘अहिले डाक्टरलाई सोधेर घरमै औषधि खाइरहेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘अस्पतालमा जानुपर्ने अवस्था आए के गर्ने भन्ने चिन्ताले सताएको छ ।’ यहाँका अस्पतालमा बेड अभाव रहेको जानकारी पाएको उनले सुनाइन् । अहिले उनको परिवारका चार सदस्य कोरोनासँग लडिरहेका छन् । छोरीहरूको अवस्था सामान्य छ । श्रीमान् र आफूले बढी ख्याल गर्नु परिरहेको उनले बताइन् । संक्रमित भएपछि उपमहानगरपालिकाबाट कुनै चासो नदिएको उनले गुनासो गरिन् । होम आइसोलेसनमा रहेका उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न कोरोना उपचारसम्बद्ध स्थानीय तका प्रतिनिधि कसैले सम्पर्क गरेका छैनन् ।
रूपन्देहीमा शनिबारसम्म पत्ता लागेका २ हजार ९ सय ३० जना सक्रीय संक्रमितमध्ये २ हजार ८ सय ५६ जना होम आइसोलेसनमा छन् । यहाँका स्थानीय तहले स्वास्थ्य कार्यालयबाट प्राप्त सूचना अनुसार नजिकका केही व्यक्तिको स्वास्थ्य अवस्था बुझेपछि धेरै संक्रमित ओझेलमा छन् । तिलोत्तमा नगरपालिकाले हरेक वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा स्वास्थ्य समिति गठन गरेर प्रत्येक संक्रमितको अवस्था बुझेर घरघरमा स्वास्थ्य सामग्री पुर्‍याउन सुरुवात गरेको कोभिड फोकल पर्सन केशव भट्टराईले दाबी गरे । सरकारी नीतिअनुसार प्रत्येक संक्रमित चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीको निगरानीमा हुनुपर्ने भए पनि कुनै स्थानीय तहले उक्त व्यवस्था लागू नगरेको जनरल फिजिसियन डा. सुदर्शन थापाले बताए । ‘होम आइसोलेसनमा बसेका बिरामीले पनि स्वास्थ्यकर्मीको रेखदेख अनिवार्य पाउनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘न जनशक्तिले पुग्ने न त सरकारले पहल नै गरिरहेको छ ।’
प्रहरी सेवामा कार्यरत नेपालगन्ज–१८ की एक महिलाले ज्वरो र रुघाखोकी लागेपछि चार दिनअघि आफ्नो र श्रीमान्को स्वाब भेरी अस्पतालमा पीसीआर परीक्षण गराइन् । दुवैको रिपोर्ट पोजिटिभ आयो । संक्रमण पुष्टि भएपछि दुवै घरैमा बस्न थाले । अहिले २१ वर्षका छोरा र १६ वर्षकी छोरी पनि बिरामी परेका छन् । छोराछोरीमा पनि कोरोनाको लक्षण देखिएको ती महिलाले बताइन् । ‘छोराछोरीको त पीसीआर जाँच पनि गराएनौं, सबैको घरमै उपचार गरिरहेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘अस्पताल गएर के गर्नु ?’ उनले पनि होम आइसोलेसनमा बसेपछि स्वास्थ्यकर्मीको फोन नआएको बताइन् । नेपालगन्ज–९ का ७२ वर्षीय वृद्ध संक्रमित भएको शनिबार १० दिन पुग्यो । स्वाबको नमुना परीक्षणका लागि दिएको अर्को दिन मोबाइलमा पोजिटिभ भएको सन्देश आयो । त्यसपछि घरमै छन् । ‘छोराले औषधि ल्याइदियो, त्यही खाएर बसेको छु,’ उनले भने, ‘कम्तीमा आफ्ना नागरिकको अवस्था के छ भनेर सरकारले सोध्नुपर्छ ।’
उपचारार्थ कता जाने ?
‘होम आइसोलेसनमा बस्दा मन आत्तिने रहेछ । अचानक स्थिति गम्भीर भए के गर्ने भन्ने पिर हुँदो रहेछ,’ रामग्राम–५ का एक संक्रमितले भने, ‘जनप्रतिनिधि र स्वास्थ्यकर्मी आएर सम्झाउने र मनोबल बढाउने काम पनि भएको छैन ।’
प्रकाशित : वैशाख १९, २०७८ ०७:२६